FIKAROHANA HIADIANA AMIN’NY CORONAVIRUS NATAON’NY IMRA : Nankatoavin’ny Fanjakana malagasy sy ny Oms
Nanao antso amin’ny ireo manam-pahaizana Malagasy rehetra ny Filoham-pirenena mba hikaroka ny fanafody ahafahana manasitrana na miaro amin’ny coronavirus. 27 mars 2020
Namaly izany antso izany ny mpikaroka avy ao amin’ny "Institut Malgache de Recherches Appliquées Ratsimamanga" na ny IMRA etsy Avarabohitra Itaosy-Antananarivo. Nahita fanafody afaka manampy ny hery fiarovana amin’ity aretina ity ry zareo avy ao amin’ny IMRA. Ny zava-maniry eto Madagasikara ihany no nanaovana izany, araka ny fanazavana.
Tsy mahasitrana tanteraka ny coronavirus akory izy ity fa afaka manampy ny hery fiarovan’ny olona voan’ity aretina ity fotsiny ihany. Araka ny fantatra mantsy, ny olona tena tratran’ny aretina coronavirus dia saika ireo olona marefo, taizan’aretina sy tsy tomombana ara-pahasalamana. Ny fihinanana ity fanafody novokarin’ny IMRA ity araka izany dia afaka manampy ireo marary hanana hery fiarovana hiatrehany ny aretina.
Efa natao andrana ity fanafody ity ary hita fa mahomby no sady nahazo fankatoavana avy amin’ny fanjakana malagasy sy ny sampan-draharahan’ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana na ny OMS. Noho izany dia hotsinjaraina amin’ireo toerana fivarotam-panafody izy ity mba hahafahan’ny rehetra manjifa azy. Izao vokatra navoakan’ny IMRA izao no manaporofo fa tena ilaina ary atao laharam-pahamehana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ireo zavamaniry misy eto amintsika satria sady harena no miantoka ny fahasalamana ihany koa.
MINISITRA LALATIANA RAKOTONDRAZAFY
"Antontanisa voamarina no avoaka eny amin’ny MBC Ivato"
Raha ny antontanisa farany nambaran’ny Sojabe Vololontiana Hanta Marie Danielle avy eo amin’ny sampana misahana ny fitsaboana eny amin’ny oniversiten’Antananarivo dia niampy 4 ireo olona voamarina fa voan’ny aretina coronavirus eto Madagasikara, 3 Italianina ary iray Malagasy, lehilahy telo ary vehivavy ny iray. 192 no vita fitiliana ka 23 no fitambaran’ny mitondra ny tsimokaretina. Avy amin’ny fiaramanidina tonga avy any ivelany avokoa izy ireo. 22 no tsy ahitana soritraretina ary ny iray no nandalo fahasemporana ka efa voavonjy sy voaara-maso tsara ankehitriny.
Nitondra fanazavana koa ankoatra izay ny mpitondra tenin’ny governemanta, Lalatiana Andriantongarivo mikasika ireo resabe etsy sy eroa fa tsy azo atokisana ny antontanisa ofisialy mikasika ny aretina coronavirus. Nanamafy ny Minisitra Andriantongarivo Lalatiana fa antontanisa voamarin’ny Institut Pasteur de Madagascar io ary ankatoavin’ny CCO-Covid 19 sy ny sampan-draharahan’ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana na ny OMS ny tarehimarika avoaka eny. Tsy misy tokony hanafenan’ny fanjakana ny marina, hoy Ramatoa minisitry ny serasera sy ny kolontsaina ary mety hiala an-daharana tsy hanampy an’i Madagasikara intsony ireo firenena manampy sy mpamatsy vola raha toa ka vaovao diso sy tsy ampy no omen’ny tompon’andraikitra eto amintsika.
Araka izany, hokarohina izay olona manely vaovao tsy marina sy mampidangana ny antontanisa misy izay tsy voamarina sy tsy voaporofo nefa aely any amin’ny tambajotran-tserasera fesiboky. Efa nisy ireo olona tratra nanakorontana saim-bahoaka tany anaty tambajotra fesiboky, nanely vaovao tsy marina. Nisy tamin’izy ireny no nigadra ary nisy ny nahazo fahafahana vonjimaika. Tsy izay mamorona ny tsaho ihany no voasazy fa ireo mizara ny tsaho anaty facebook koa.
Nanao antso avo koa ramatoa minisitra araka izany fa homena 5 tapitrisa ariary izay mahafantatra ilay vehivavy nanaparitaka rakipeo nanizingizina fa 200 izao no voan’ny coronavirus eto Antananarivo, 70 any Toamasina ary efa maty ilay tovovavy 19 taona. "Tsy maintsy hatao izay hahitana iny olona nitonona ho mpanao gazety iny ary hampiharina aminy ny lalàna", hoy hatrany ny Minisitra.